Wasiirka Caafimaadka oo kormeertay xarunta Wicitaannada lambarka Deg-Degga ah ee COVID-19 | Allbalcad Online
Home WARARKA Wasiirka Caafimaadka oo kormeertay xarunta Wicitaannada lambarka Deg-Degga ah ee COVID-19
Wasiirka Caafimaadka oo kormeertay xarunta Wicitaannada lambarka Deg-Degga ah ee COVID-19
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda Dr. Fawziya Abiikar Nuur ayaa maanta kormeer shaqo ku tagtay Isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Benaadir halkaasi oo Tallaalka COVID-19 uu uga socdo si joogta ah maalin walba.
Wasiirka ayaa wakhti laqaadatay lana hadashay shacab aad u badan oo tallaalka soo doontay, iyadoo u sheegtay in mudnaanta 1aad lasiinayo Shaaqalaha Caafimaadka, kuwa dawladaha hoose, booliiska iyo Dadka da’da ah ee la nool xanuunada Raaga, sidoo kale dadka danyarta ah.
Dhinaca kale Wasiir Dr. Fawziya Abiikar Nuur ayaa booqatay xarunta Wicitaanka lambarka Deg-dega ah 449 iyo 466, iyadoo u kuurgashay shaqada ka socoto ee ay wadaan dhallinyarda loo tababaray ee ka jawaabaya wicitaanada dadka doonaya talooyinka caafimaad ee la xiriira kahortagga Caabuqa COVID-19.
Ugu danbeyntii Wasiirka Caafimaadka ayaa u mahadceliysay shaqaalaha bixinaya Tallaalka, Kuwa ka shaqeeya xarunta wicitaanka iyo guud Ahaan Maamulka iyo Shaqaalaha Isbitaalka Benadir.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Tallaalka COVID-19 gaarsiisay Galmudug
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Madaxweyneyaal ergo ah u diray madaxda jubaland & puntland